အဲၪလိၬကွံၩလိၬနၥံၪအၥၭဆံၭ | Radio Veritas Asia
ဘဲၫဖါအဲၪယၧၩအၥိၭနီၪ, ယဝ့ၫဒၪယီၩ ယအဲၪနၥံၪဆ့လီၫ. အီၪဂုးခၧၫ့လၧယဆၧအဲၪအဖၧၩ့ဆံၭ.- နၥံၪအ့ၪထီးန့ဖံၭထၬယဆၧမၪလူၬလဖၪနီၪ, နၥံၪမိအီၪဂုးခၧၫ့ လၧယဆၧအဲၪအဖၧၩ့ ဘဲၫယထီးန့ဖံၭထၬယဖါ အဆၧမၪလူၬလဖၪနီၪ, ဒဲယအီၪဂုးခၧၫ့ယဝ့ၫ လၧအ ဆၧအဲၪအဖၧၩ့အၥိၭနီၪလီၫ.
ဘဲၫၥိၭယဆၧၥၭထိၬမိအီၪဝ့ၫလၧနၥံၪအဖၧၩ့, ဒဲနၥံၪအဆၧၥၭထိၬမိလၧၫ့ထၪ့ဎွ့ၩထၪ့ဝ့ၫတၭ, ယလီၩဘၪယူၭဆၧယီၩလဖၪလီၫ.- အယီၩမွဲယဆၧမၪလူၬ, ဘဲၫယအဲၪနၥံၪအၥိၭနီၪ, အဲၪလိၬကွံၩလိၬနၥံၪအၥၭ ဘဲၫနီၪအၥိၭဆံၭ.
ၦလဂၩဂၩအ့ၪအီၪက့ၪလၩ့ အၥၭမၧၫ့လၧအထံၩအၥိၭအကၠီၩ့နီၪ, ၦၡၩအဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪ ဒိၪနဲၪ့အဝ့ၫနီၪ အီၪနးဂၩအ့ၬ.- ထီးဒၪဆၧလၧယမၪလူၬနၥံၪနီၪ နၥံၪအ့ၪမၩတၭ, နၥံၪမွဲယထံၩယၥိၭလီၫ. ယကိၭလၧၩ့နၥံၪလၧဎီးလၧၡၩအ့ၬ. အဂဲးဘဲၫယီၩ အ ကဆါမၩနီၫလဲၪနီၫလဲၪနီၪ, အဎီးအၡၩၥ့ၪယၫဝ့ၫအ့ၬ. ယကိၭထဲၩ့နၥံၪလၧထံၩလၧၥိၭလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ကယဲယနါဂၧၫ့ဆၧလၧဖါအအီၪနီၪ ယဒုၭၥ့ၪယၫနၥံၪ လီၫ.
နၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩ နၥံၪလရွံန့ဘၪယၧၩတၭ, ယဝ့ၫဒၪယီၩ ယရွံန့ယူၭနၥံၪ, ဒဲအီၪက့ၪလၩ့ယူၭနၥံၪ ဘဲၫၥိၭနၥံၪမိလ့ၩၥၪထၪ့, ဒဲနၥံၪအဆၧၥၪနီၪ မိအီၪဂုးခၧၫ့ဝ့ၫလီၫ. ဘဲၫၥိၭနၥံၪအ့ၪအၪ့ကံၩ့ဆၧလမံၩ့လါလါ လၧဖါနီၪလၧယမံၩ့အကၠီၩ့တၭ, အဝ့ၫဒၪမိဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫလၧနၥံၪအဂးလီၫ.- ယမၪလူၬနၥံၪလၧဆၧလဖၪယီၩ ဘဲၫၥိၭနၥံၪမိအဲၪလိၬကွံၩလိၬနၥံၪအၥၭလီၫ.